Berger sy ny sariny tamin'ny afo tao California | Famoronana an-tserasera
California dia nisedra doro tanety sasany tato ho ato toy ny tsy nananan'izy ireo nandritra ny taona maro. Nihantsy ny karazana seho rehetra izy ireo mba hahitana tranobe malaza nandalo ny afo na ny fomba nampiorina ny fampihorohoroana tamin'ny fiainan'ny olona maro tany amin'ny morontsiraka andrefan'i Etazonia.
Noa Berger dia mpaka sary nahavita asehoy ny firehetan'ny lelafo avy ao afovoan'ireo afon'i California ireo. Sary vitsivitsy izay manazava ny fampihorohoroana mety hiaina rehefa mandrahona ny ain'ny olona ny lela afo.
Berger dia manam-pahaizana manokana amin'ireo raharaha ireo ary ho an'ny mihoatra ny 20 taona tao anatin'ny tokotanin'ny firehetana mampidi-doza indrindra tany Amerika io. Isan-taona dia mandany enim-bolana amin'ny firaketana ny vanim-potoanan'ny afo izy, amin'ny fampiasana ny fahaizany sary mba hanaovana izany.
Seho ihany koa ny maherifo an'ireo mpamono afo izay miatrika ny androny isan'andro ireo tadin-tsambo miteraka alohan'ny tongotr'izy ireo na ny fomba ahafahan'ny rivotra manova afo ho fandrika hahafaty an'ireo mpamily am-polony ao anaty fiarany.
Nanatrika ny andiana afo izy Napetrak'izy ireo tany California ny vaovao rehetra an'izao tontolo izao. Amin'ireny sary ireny, ankoatry ny famelana anay tsy hiteny noho ny fisamborana sasany, dia mampiseho ireo maherifo afaka mamono ireo afo ireo na farafaharatsiny mifehy azy ireo, rehefa afaka ...
Saripika toy ny an'ny mpamono afo manao a tranom-borona feno saka hanavotana azy ireo, raha ny mpiasa kosa mijery ny hopitaly ho rendrika ao anaty afo. Sary hahatsiarovanao ny fampihorohoroana naterak'ireo hain-trano tao California izay nandalo teo amin'ny tantara ho toy ny fiakarana mafy sy fahavoazana lehibe naterak'izany.
Mandao anao izahay miaraka amin'ny tranonkalanao so it afaka fantatrao ny asany be dia be; ary mankany Jupiter izahay miaraka amin'ireny sary tsy mampino ireny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Sary avy ao anaty afo tao California